Akuwona wonke amaphupho amahle. Okufanayo kungashiwo ngokuchazwa kwabo. I-Phaphama ngemva kwephupho elibi, ngifuna ukususa ememori. Kodwa, ukukhohlwa lokhu, kungenzeka yini ukugwema imiphumela yangaphambilini empeleni? Njengoba amacala amaningi abonisa, cha. Ngakho-ke, kungcono ukuvimbela isimo kunokusixazulula. Lokhu kusitshela incwadi yephupho. Ukuphanga, ubugebengu, ukweba ephusheni yilokho esizokukhuluma ngakho esihlokweni sethu.
Bheka ukuphanga ohlangothini
Uke wabukela ephusheni ukuthi ukuphanga kwenzekani? Ngakho empilweni yangempela uyethemba kakhulu. Yini incwadi yephupho engayisho? Ukuphanga ngokuvamile kuvusa amaphupho lapho, ehambisana nomuntu ophuphayo, kukhona umuntu ozama ukufaka izinti ngamasondo ngamandla akhe onke. Ngakho-ke, kufanele uqaphele kakhulu.
Futhi lephupho inezincazelo eziningi eziningana. Okokuqala, angasho ukuthi esikhathini esizayo esiseduze uzosusa ukuhlaselwa komuntu ongejabule. Okwesibili, umbono onjalo ungasho ukuthi unecala lombuso (awuzange ukhokhe izinsiza noma izintela). Okwesithathu, ukuphanga ephusheni kungabangela izinkinga ezinkulu. Ngokushesha uyobe ukhululekile yizinkinga eziningi, okungeke kube lula ukuxazulula. Ngabe kulesi simo ungeluleka kanjani incwadi yephupho? Ukuphanga kwenzeke emgwaqweni, ekhaya, emsebenzini - akunandaba. Noma kunjalo, uzodinga usizo lwabangani noma izihlobo. U-Dreambook uphinde weluleke ukuthi angayinaki imisebenzi yabasemzini.
Uma umile ephusheni bese ubona ukuthi abantu baphangiwe kanjani, khona-ke empilweni ungumqondisi futhi unzima. Yingakho unezitha eziningi ezizama ukulimaza nganoma iyiphi indlela.
Uma emgwaqweni wahlaselwa yizigebengu eziningana, bese kusasa, ulinde ukudumala. Futhi kuzokwenzeka ngenxa yesimo ongeke uthinte nganoma iyiphi indlela. Kulokhu, ibhuku lephupho liluleka ukuba lingene ezimweni eziyingozi nasezintweni ezimbi. Akukho okuhle okuzokuletha.
Ukulala, lapho abaphangi abafica khona emgwaqweni, kusho ukungqubuzana okuhlobene nempilo yakho. Akudingekile kuleso simo ukuthi sincike eselulekweni sabantu abangaphandle noma sibheke eminye imithi. Izenzo ezinjalo zizolimaza kuphela. Indlela enengqondo kakhulu futhi ephumelelayo kuyoba ukubona udokotela. Lokhu kuboniswa yincwadi yephupho.
Ukuphanga emgwaqweni, owahambisana nokushaya nokuhlambalaza, kusho ukuthi ukuhlazeka nokudabuka kuzokufika empilweni yangempela. Umhumushi wephupho kuleli cala weluleka ukukhohlwa lesi simo, ngaphandle kwalokho ukuqoqwa kwentukuthelo kungadala ukucindezeleka noma ukuthunyelwa kobugebengu.
Uma ephusheni lakho uzama ukufihla isela, khona-ke empilweni yangempela uzama ukuqeda amandla amabi. Futhi lo mbono ebusuku ungabikezela ukwesaba komunye umuntu. Lo muntu uvame ukukucindezela ngokuziphatha, futhi wena, ngeshwa, awukwazi ukumelana naye ngezizathu ezingaziwa. Yini incwadi yephupho ephakamisa kulokhu? Ukuphanga okuzama ukugwema ephusheni lakho kusebenza njengesivikelo ngokumelene nezinambuzane ezizondwayo. Yiba nesibindi futhi unamandla.
Incwadi yephupho ingasitshela ngani ngaleli phupho? Ukuphanga kwefulethi kusho ukuthi usenkingeni nokudumazeka. Emva kwesimo samanje, kuzodingeka ulwa isikhathi eside futhi ubuyisele idumela lakho.
Uma ephusheni lakho wabona umphangi endaweni yakho yokuhlala, kusho ukuthi umuntu uyakwakha izisulu. Bheka eduze kwendawo yakho. Mhlawumbe uzokwazi ukuthola ukuthi ngubani lo oshayayo.
Yini enye engayitshela incwadi yephupho? Ukuchazwa kwamaphupho, ukuphanga okwenzeka endlini yakho, kungaba okuhlukile. Konke kuncike ekutheni isimo sinikethisa embonweni wobusuku. Isibonelo, uma ubona ukuthi isela ligibela kanjani ewindini lakho, oshade naye uyashintsha.
Uma ubona isela lokuba, kusho ukuthi kungekudala zonke izifiso zakho zizogcwaliseka. Ngokuyinhloko lokhu kuzokhathazeka ngezikhathi zokusebenza. Isibonelo, iphrojekthi owasebenze isikhathi eside izoletha inzuzo.
Ukuze ubone ukuthi endlini yakho uphangwa abantu owaziwayo kuwe, kusho ukuhlukaniswa emgqeni walabo oye wabethemba ngaso sonke isikhathi.
Yini enye esingayitshela encwadini yephupho? Ukuphanga kwefulethi ukupholisa ubudlelwano nomunye uhhafu. Esikhathini esizayo esiseduze uzobe uxabana kakhulu futhi uhlasele. Kungenzeka nokuthi ubuhlobo nabantwana bonakaliswa ngenxa yesimo esingenangqondo. Ukungahloniphi ohlangothini lwabo kuzozizwa njalo, kepha, yebo, lesi simo asikwazi ukulungiswa nganoma iyiphi indlela.
Uma ngemuva kokuphanga uqale emva "isivakashi esingavunyelwe", ulinde esikhathini esizayo esiseduze sezimpi zokuphikisana. Bazokuphishekela kokubili emsebenzini nasembusweni womuntu siqu. Yini le ncwadi ephupho eyokweluleka? Ukuphanga kwendlu kulokhu kusho ukufisa kwakho ukuthuthukisa isimo. Ungabeki noma kunjani.
Iphupho ongazange uvumele ukuphanga, uthi esikhathini esizayo esiseduze ulindele inzuzo. Kodwa kuzokwenzeka kuphela lapho ufunda ngempela ukusiza abantu abadinga usizo.
Uke wabamba lesi sigebengu? Lesi isibonakaliso esihle. Ngokushesha bonke abancintisana nabo kanye nabangenele bakho bayonqotshwa.
Iphupho langemuva lihunyushwa, lapho uphishekela khona umphangi. Kulokhu, kufanele uqaphele kakhulu.
Uma ubamba isela endlini yakho, kusho ukungazethembi kwabanye. Njengoba incwadi yephupho ithi, kulokhu yilokho okudingayo.
Uma ubambe futhi ujezisa isela endalweni, khona-ke udinga ukuziphatha kahle kwabanye.
Uma isela singumphuphi ngokwakhe
Uke waba umphangi? Uzokwazi ukuxazulula inkinga ekukukhathaza isikhathi eside. Kuphela kulesi simo umuntu akufanele athembele kuphela kolwazi namandla akhe. Kungcono kakhulu ukulalela iseluleko kubantu abanolwazi. Mhlawumbe kuyiseluleko sabo esizobaluleka empilweni yakho.
Futhi leli phupho lingachazwa futhi lihlukile ngendlela ehlukile. Uma ubukela ukuthi uphatha kanjani umuntu, ngokushesha maduze wonke amathemba akho namapulani azophenduka uthuli.
Uma uphonse othile ephusheni futhi uqale ukugijima, kusho ukuthi impilo yakho ihlaselwa. Uvakashele ngokushesha udokotela!
Ingabe uyaba imali ephusheni? Lokhu kusho ukuthi empilweni yangempela uzosaphazamisa idumela lakho.
Kuthiwani uma uphanga ibhange? Lokhu kusho izinkinga zempahla nezinkinga.
Ukushushiswa nokuhlukunyezwa komphuphi
Yini engachazwa ngayo incazelo yephupho? Ukuphanga kwaphela ekushushisweni - ngakho-ke, incazelo yombono onjalo kulokhu izoba yinto engalungile. Lapha, ukweba kuyisixwayiso ngokumelene nokuhlanganyela esimweni esizoba nomthelela omubi esikhathini esizayo salophupho.
Uma ubona ephusheni ukuthi amaphoyisa ashushisa kanjani ngokuphanga, kusho ukuthi maduzane empilweni yakho kuyofika isikhathi lapho bonke abakuzungezile behlukana nawe.
Ukhokhiswe ukweba? Lindela ukuwa kuzo zonke izimo ngenxa yokungcola okuncane.
Uma uphanga othile nomunye umuntu, empeleni uzobeka umuntu omuhle.
Uma ubheka ukuthi umuntu ujeziswa kanjani ngokuphanga, kufanele ube nokusekela kakhulu kubantu.
Amaphupho ajabule kuwe!
Iyiphi iphupho eliphuphayo? Ukuchaza okuningiliziwe kwephupho
Sigmoidoscopy - kubalulekile ukuba impilo yakho
Anatomy - kuyini? Anatomy njengoba isayensi
Inhlanganiso ukhonkolo: zinhlobo kwabantu ukubala